Iyunithi yethu esanda kulungiswa isethelwe ukukujabulisa (izithombe zizofika nefenisha entsha). Ngokubuka okuhle kolwandle, leli yunithi litholakala endaweni efanele e-Minjerribah (North Stradbroke)'s Home Beach, futhi likwazi ukufinyelela ngqo emigwaqweni yase-Anchorage resort. Ukufinyelela okulula kokuya emabhishi amangalisayo - njengeCylinder Beach (ukuya eNingizimu), i-Adar Rock kanye neFlinder's Beach (eNyakatho) - ozodinga ukuvikela ilanga kanye nababhukudi.
Iyunithi yethu inekhishi elisebenza ngokugcwele, igumbi eliyinhloko elizimele (umbhede wendlovukazi) kanye nendawo yokuphumula enkulu enokubukwa okungavinjelwanga kolwandle, evulela ithafa elibanzi ukuze ujabulele umoya onosawoti kanye nombhede osofa ababili (izithombe ezizayo).
Iyunithi itholakala ngaphakathi kwebhilidi le-Anchorage resort (nakuba lingaphethwe abaphathi bendawo), linesitobhi sebhasi (i-Anchorage) emnyango walo, okusho ukuthi ungaya eBrisbane ngaphandle kwemoto, uma kudingeka.
Indawo yokungcebeleka icishe ibhekane ne-Bowls Club, ebamba izimakethe zangeSonto ngemikhiqizo yasendaweni, izindawo ezinhle zokuphonswa kwebhola kanye nezinketho zokudla okulula.
Ikhofi elimnandi nebhikawozi cishe eduze kwakho, ngaphezu kwesitolo sasolwandle sikaNoreen esiyisakhiwo sodumo esigcina izinhlobonhlobo zemikhiqizo emihle, okuhlanganisa izipho ezikhuthazayo nezinto zokuhlobisa.